Coronavirus: Talyaaniga oo 16 milyan oo qof karantiilay |
Coronavirus: Talyaaniga oo 16 milyan oo qof karantiilay
Iskuullada, jiimka iyo meelaha lagu dabaasho ayaa xirnaan doona iyadoo isu imaatinnada bulshadana la hakiyay, sida uu sheegay Ra`iisul Wasaaraha dalkaas Giuseppe Conte.
Tallaabooyinkan ayaa sii socon doona ilaa 3-da April.
Talyaaniga waa dalka ugu daran dalalka Yurub ee caabuqu uu sida ba`an u saameeyay, waxaana shalay laga soo sheegay koror badan oo tirada dadka uu soo ritay ah.
Horraantii toddobaadkan dowladda ayaa ku dhawaaqday in muddo 10 maalmood ah la xiro iskuullada iyo jaamacadaha dalkaas ku yaalla.
Khasaaraha dhimashada ee dalka Talyaaniga ayaa gaartay 230, iyadoo ay saraakiishu sheegeen in ilaa 50 ay caabuqa u dhinteen muddo 24 saac gudahood ah. Tirada kiisaska la xaqiijiyay ayaa shalay sare uga kacay in ka badan 1,200 iyadoo gaartay 5,883.
“Waxaanu dooneynaa inaan damaanad qaadno caafimaadka dadkeenna. Waanu garwaaqsan nahay in tallaabooyinka ay caqabado ka dhala doonaan, mararka qaar kuwo yar mararka qaadnna kuwo aad u badan,” ayuu yiri Mr Conte.
“Balse waxaa la joogaa waqtigii aan qaadi lahayn mas`uuliyadda.”
Tallaabooyinkan cusub waxaa ka mid ah, in dadku aysan iska geli karin amaba ka bixi karin gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaalla ee Lombardy, oo hoy u ah 10 milyan oo qof, marka laga reebo xaalado degdeg ah. Milan waa magaalada ugu weyn gobolkaas.
Mr Conte ayaa sheegay in 14-ka gobol ee go`aankan uu saameeyay ay kala yihiin Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro and Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso iyo Venice.
Ilaa iyo haatan keliya qiyaastii 50,000 oo qof oo waqooyiga Talyaaniga ku nool ayuu saameeyay go`aanka karantiilka.
Maxay yihiin tallaabooyinka?
Aroosyada iyo duugta ayaa la hakiyay, iyo sidoo kale isu imaatinno dhaqameedyada iyo diimeedyada. Shaleemooyinka, baararka habeenkii lagu caweeyo, jiimka, goobaha lagu dabaasho iyo madxafyada ayaa la xiray.
Maqaayadaha ayaa keliya furnaan kara laga saacadaha 06:00 ilaa 18:00 balse waa inay macaamiisha fadhisa isu jirsadaan masaafo dhan ugu yaraan 1m (3ft).
Dadka ayaa loo sheegay inay guryaha ku nagaadaan inta ay awoodaan, kuwa jebiya tallaabooyinkan karantiilka ayaa jeelka ku qaadan doona saddex bilood.
Tartamada cayaaraha ayaa iyaguna la hakiyay, madaxweynaha cayaartoyda kubadda cagta Talyaaniga ayaa ku baaqay in dhammaan tartamada la joojiyo.
Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa ugu baaqay Talyaaniga inay diiradda saarto tallaabooyin lagu xakameynayo faafitaanka caabuqa.
Tallaabooyinkan ayaa la mid ah kuwii uu hore Shiinuhu ugu soo rogay malaayiin qof.
Talyaaniga ayaa sheega inuu shaqaaleyn doono dhaqaatiirta howlgabka noqodan si ay uga qeyb qaataan wax ka qabashada caabuqa.
‘Meelaha kale ee uu caabuqu aadka u saameeyay’
Iran ayaa xaqiijisay ilaa 6,000 oo qof oo uu caabuqu saameeyay iyo 145 dhimasho ah, kiisaska guud ahaan dunida ayaana haatan ka badan 100,000.
Xildhibaankii labaad ee dalkaasi ku nool ayaa la sheegay inuu ka mid yahay dadka caabuqa u dhintay, halka saraakiisha caafimaadku ay ka baqayaan in tirada kiisaska ay intaasi ka badan karto.
Ilaa iyo haatan 3,500 dhimasho oo caabuqa coronavirus la xiriirta ayaa dunida laga soo sheegay. Badankood waxay dadku ugu dhinteen Shiinaha, oo uu caabuqu ka yimid bishii December.
Waa maxay kiisaskii ugu dambeeyay ee caabuqa guud ahaan dunida?
Saraakiisha Kuuriyada Koofureed ayaa sheegay in 367 kiisas cusub ah laga soo sheegay dalkaasim taasoo tirada ka dhigeysa 7,134.
Shiinaha ayaa soo weriyay in tan iyo bishii January laga soo sheegay tiradii ugu yareyd ee kiisaska caabuqa maalin gudaheed.
Wuhan waxaa laga soo sheegay ilaa 27 qof oo ugu dhintay caabuqa.
Dalka Iran, 21 qof ayaa caabuqa coronavirus ugu dhintay shalay, ilaa 16,000 oo qof oo kale ayuuna soo ritay caabuqu.
Dalka Mareykankana, markab ay saaran yihiin 3,533 oo rakaab ah ayaa lagu hayaa meel u dhow xeebta San Francisco kaddib markii 21 qof oo saarnaa laga helay caabuqa.
Australia, nin ku jira da`da 80-meeyada ayaa noqday qofkii saddexaad ee caabuqa ugu dhinta dalkaas.